तनावमा रेखा , यसरी चलाउँछिन अहिले आफ्नो घर खर्च ! - Nepali Cinema News
Home > Bollywood > तनावमा रेखा , यसरी चलाउँछिन अहिले आफ्नो घर खर्च !
February 04, 2018 Bollywood
बलिउडमा निकै सुन्दरी अभिनेत्रीको छवि बनाएकी अभिनेत्री रेखाको जिवनमा निकै उतार चढाव आएको समाचारहरुले बेलाबखतमा संचार माध्यमका पानाहरु भरीने गरेका छन् । उनि जतीबेला प्रगतीको सिंडि चड्दै थिईन्, त्यतीबेला देखी एक्लो भैरहेकी छिन् । उनि अहिले सम्म अबिवाहीत छिन् ।